Dooni ay Wateen Burcad Badeed oo ku degtay Xeebaha Jasiirada Kooyaame ee J/Hoose – SBC
Dooni ay Wateen Burcad Badeed oo ku degtay Xeebaha Jasiirada Kooyaame ee J/Hoose
Wararka ka imanaya Jasiirada Kooyaame ee gobolka Jubada hoose ayaa sheegaya in halkaasi ay soo gaareen ku dhowaad 12 nin oo Burcad badeeda Soomaalida ka tirsan kuwaas oo ay dooni ay wateen ugaga degtay badweynta ku hareereysan Jasiiradaasi.
Kaluumeysato ku sugan Jasiiradaasi Kooyaame ayaa u sheegay SBC International in 12kan nin ee Burcad badeeda ah ay soo gaareen Jasiirada iyagoo ku socda laba Saxiimadood oo yar yar ah waxayna siteen Hubna yar yar iyo kan Gacanta laga tuuro sida noocyada la yiraahdo RBG iyo boobayaasha.
Ragan Burcad badeeda ah doonida ay wateen ayaa aheyd nooca xamuulka qaada waxayna ka aka xeysteen xeebta Jasiirada Madhawa iyagoo markaasi uu damacoodu ahaa in ay ku soo qafaashaan maraakiibta bada Mareysa.
Maalmihii dambe ayaa sida ay noo xaqiijiyeen goobjoogayaal ku sugan Jasiirada Kooyaame waxa jasiiradaasi ku soo badanayay kooxaha Burcad badeeda ah ee iyagu fariisimada halkaasi ka sameysanaya iyadoona ay siweyn u buux dhaafiyey jasiiradaasi.
Odayaasha iyo Waxgaradka Jasiiradaha ku yaala gobolka Jubada hoose ayaa arintani ka muujiyay walaac xoogleh iyagoona sheegay in hadii ay burcad badeedu ku soo kordhaan jasiiradahan oo ah kuwo yar yar ay saameyn ku yeelan doonto dadka ku dhaqan iyo weliba ganasiga kaluumeysatada.
Waa markii ugu horeysay oo ay soo baxaan fariisimada kooxaha Burcad badeeda ah ay ka sameysanayaan xeebaha jasiiradaha koonfurta dalka iyadoona ay tani noqoneyso xaalado iyo talaabooyin horleh oo ay burcad badeedu qaadeen.